သျှမ်းနီလူငယ်: သျှမ်းနီလူမျိုးတုို့၏ အုိုးစည်နုိုင်ငံတော် Country of Drum
သျှမ်းနီလူမျိုးတုို့၏ အုိုးစည်နုိုင်ငံတော် Country of Drum
Taileng Nationalities Development Party (TNDP) သျှမ်းနီ အမျိုးသားများ ဖွံ့ဖြိုးတုိုးတက်ရေး ပါတီကုို ထူထောင်လာ၍ တုိုင်းရင်းသား လူငယ်တော်တော် များများနှင့် အချို့သမိုင်းကုို အလေးမထားကြသူများ တအံ့တအော်ဖြင့် သျှမ်နီလူမျိုးဆုိုတာ ဘယ်မှာနေတာလဲ သျှမ်းပြည်ဘယ်ဘက်မှာလဲ စသည်ဖြင့် ပြောဆုိုနေသံများကြောင့် သျှမ်းနီလူမျိုးများအကြောင်း တစေ့တစောင်းတင်ပြလုိုက်ရပါသည်။
အမှန်စဉ်စစ်ကာ သျှမ်းနီလူမျိုးသည် မနေ့တနေ့ကမှ မုိုးပေါ်မှကျကာ ပေါ်ပေါက်လာသော လူမျိုးမဟုတ်ခဲ့ပါ မြန်မာ့သမုိုင်းတလျှောက်ကုို လှန်လောကြည့်လုိုက်လျှင်ပင် သိရှိနုိုင်ပါသည်။
မြန်ပြည်ဟု သီးခြားမပေါ်ပေါက်ခင်ကထဲက ရှိနှင့်ပြီးသား လူမျိုးတမျိုးပင်ဖြစ်သည်။ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် တိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ် လုနီးပါဖြစ်နေသော သျှမ်းလူမျိုးကြီးပင်ဖြစ်သည်။ ယနေ့မြန်မာနုိုင်ငံတွင် ဘုရင်အဖြစ်နေခဲ့သော သျှမ်းလူမျိုးဟု ဆုိုလျှင်လဲမမှားပေ..
၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် အတည်ပြုပြဌာန်းခဲ့သော နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံမှုကြမ်း ရေးဆွဲစဉ်ကာလက ဦးထွန်းရင်သည် ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် တိုင်းလျဲန်(ရှမ်းနီ) အမျိုးသား တဦးဖြစ်ပါသည်။
မြေလပ် သျှမ်းပြည်နယ် (တိုင်းလျဲန်ပြည်နယ်) သတ်မှတ် ဖွဲ့စည်းပေးရန် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပေဒေ ရေးဆွဲရေး ကော်မရှင်သို့ ၂၄-၂-၇၂ ရက်နေ့စွဲပါ စာတမ်းဖြင့် တရားဝင်အဆိုပြု တင်ပြခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။
၁၉၆၂-ခုနှစ်၊ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း အာဏာသိမ်းပြီးနောက် သျှမ်းနီလူမျိုး နွယ်စုများ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကဒ်ပြားတွင် လူမျိုးအမည် ဖော်ပြရာ၌ ‘ရှမ်း - ဗမာ’ ဟုသာ ထည့်သွင်း ရေးသားစေခဲ့ပြီး၊ ၁၉၈၈ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းတွင်မူ ‘ဗမာ’ ဟုသာ ယနေ့အထိ ထည့်သွင်း သုံးနှုန်းစေခဲ့သည်။
(မျိုးမစစ်သော ဟက်ကာ တရုတ်မခြေသေး၏သား အာဏာရူးနေ၀င်းခေတ်)
၁၉၉၃ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ညောင်နှစ်ပင် အမျိုးသားညီလာခံတွင် ရှမ်းနီအမျိုးသား လက္ခဏာ ဖော်ဆောင်ခွင့်ပေးရန် ရှမ်းနီခေါင်းဆောင် တဦးဖြစ်သူ ဦးစိုင်းထိန်လင်းက အကြံပြုချက် စာတမ်းတစောင် တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။
ရှေးသမုိုင်းသက်သေ အထောက်အထား အခုိုင်အမာရှိခဲ့သော သျှမ်းနီလူမျိုးများ အကြောင်းကုို တင်ပြရပါလျှင်..
သျှမ်းနီနုိုင်ငံတော်ကုို အချို့သမုိုင်းဆရာများက မုိုးကောင်းခေတ် ဟုခေါ်ဆုို ရေးမှတ်ခဲ့ကြသည်။
သျှမ်းအုိုးစည်နုိုင်ငံ (Country of Drum)
သျှမ်းလူ့အဖွဲ့အစည်း (Shan Society)
1.အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစား ( Nobility Class)
အုပ်ချုပ်သူ စော်ဘွား (Soahpa) မျိုးရုိုးသည် တော်ဝင်မိသားစုဖြစ်သည်။ မျိုးရုိုးအမည်ကုို နာမည်ရှေ့တွင် (Soa, Hkun, Nang) စသည်ဖြင့် အမည်မှည့်ခေါ်သည်။
Tai Leng စော်ဘွားများသည် Golden Tiger (Hkam Hso) ရွှေရောင်ရှိသော ကျား အမည်ကုို ခံယူသည်။ စော်ဘွား အခြေစုိုက်နေထုိုင်ရာနေရာကုို (Haw) ဟုခေါ်သည်။ မြို့(Mo”ng) နှင့် ရွာ (Bann / Mann) များကုို အုပ်ချုပ်သည်။
အမတ် (Amat) များကုို အတွင်း၊ အပြင် ခန့်ထား၍ ၎င်းတုို့အောက်တွင် စော်ဘွားခန့်ထားသော ရွာကြီးအမှူး (Paw Maing) များ၊ ဟိန် (Assistant Administrative Officer) များခန့်ထား အုပ်ချုပ်သည်။ စော်ဘွားနှင့် အမတ်များသည် မျိုးရုိုးစဉ်ဆက် ဆက်ခံနုိုင်သည်။
မုိုးကောင်းစော်ဘွားပုိုင်နယ် (ဥဒေဂရိတုိုင်း) တွင် မုိုင်း ၉ ၉ လုံးရည်။ အမှတ်တံဆိပ်မှာ သျှမ်းအုိုးစည် ဖြစ်သည်။ မုိုင်းညှင်းစော်ဘွားပုိုင်နယ် (အာဋ၀ီရတုိုင်း) တွင် မုိုင်း ၃၃ လုံးရှိသည်။ အမှတ်တံဆိပ်မှာ ဗျိုင်းဖြစ်သည်။
အမိအဖ မျိုးရုိုးနှင့် အကြိမ်အရေအတွတ်ကုို လုိုက်၍ “လံရေ၊ လအီ၊ လအမ်၊ လအုို့၊ လအစ်၊ လပုို၊ လမုို” ဖြင့်၎င်း၊ နန့်အီ (ဒုတိယသမီး)၊ နန့်အုိုင် (စတုတ္ထသမီး) ဟူ၍၎င်း၊ ယောင်္ကျားလေးများကုို အုိုက်ညီ၊ အုိုက်ဆယ်၊ အုိုက်ပန် ဟူ၍ ကြီးစဉ်ငယ်လုိုက် မည့်ခေါ်သည်။
နှစ်သစ်ကူးကာလသည် နတ်တော်လ (လင်းစိန်း) ဖြစ်ပြီး၊ နောက်ဆုံးလမှာ တန်ဆောင်မုန်းလဖြစ်သည်။ အရှေ့နွယ် တုိုင်းလျဲန် (သျှမ်းနီ) အမျိုးသားများသည် သျှမ်းဘောင်းဘီ ရှည်ကုို၎င်း၊ အနောက်နွယ် တုိုင်းလျဲန်တုို့သည် ပုဆုိုးကုို၎င်း ၀တဆင်သည်။ အင်းကွတ်၊ ထုိုးကွင်း၊ မင်ကြောင်ကု အမျိုးသားများတွင် ထုိုးကြသည်။
ဆောက်ဆန်လုံနတ် (မုိုးကောင်းအရှင်ကြီး) သည် စောမောင်အုိုင်နှင့် အကုိုစောလုံ ငန်းဘွတုို့ တမလွန်တွင် သျှမ်းရုိုးရာတန် အဖြစ် ကုိုးကွယ်သည်။ နတ်ကွန်းကုို တဆောင်စီ သီးခြင်းဆောက်လုပ်၍ ကျွဲကုို သတ်ကာ အူ၊ အသဲ အမြှစ်၊ အသားများကုို တွဲလောင်းချိတ်ပြီးပူဇော်ပသသည်။ ၎င်းနတ်ကုို သျှမ်းပြည် အရှေ့ပုိုင်းတွင်လည်း ပူဇော်ပသ၏။
၃. မြောက်ဖက်အရပ်မှ တုိုက်ခုိုက်လာမည့် ရန်ကြောင့် ယူနန်တောင်ဖ်နုင့်
အနောက်ဖက်ကုို ရွှေ့ပြောင်းသည်။ ပထမအကြိမ်ရွှေ့ပြောင်းသော (Tai Long/ Great Tai) သျှမ်းကြီးများ၊ နောက်အကြိမ် ရွှေ့ပြောင်းသော ( Tai Noi/ Little Tai) သျှမ်းကလေးများဟူ၍ နှစ်မျိုးအနက် သျှမ်းကများရွှေ့ပြောင်းမှုက သမုိုင်းတွင် ပုို၍အရေးပါသည်။
တရုတ်သမုိုင်းဦးဖော်ပြချက်အရ 128.BC တွင် မြန်မာနုိုင်ငံမြောက်ပုိုင်းကုိုဖြတ်၍ အန္ဒိယ- ယူနန် သွားရန် လမ်းကြောင်းကုို ဖော်ပြသည်။ AD.69 ၌ Yung Ch’ang ကုို ယူနန်နယ်တွင် ထူထောင်သည်။ AD.342 ၌ Yung Ch’ang ကုို (Han dynasty) တရုတ်တုို့သိမ်းသည်။
ယူနန်အနောက်ပုိုင်းဖြစ်သော မြန်မာနုိုင်ငံမြောက်ပုိုင်း ဒေသမှ ကြံ၊ ဆင်၊ လိပ်ခွံ၊ ကျောက်စိမ်း၊ ပယင်း၊ ရွှေ၊ ငွေ၊ ဆား၊ သစ်ကြပုိုး၊ ၀ါဂွမ်း တုို့ထွတ်ရှိသည်။
AD.650 ၌ နန်ချောင် (Nan Mao) မြို့တော်ကုို တာလီ (Tali) တွင် Hsi-Nu-Lo ကထူထောင်သည်။
AD.750 ၌ နန်ချောင်ဘုရင် ကူလူဖန် (Ko-lo-feng) လက်ထက်တွင် ပျူနုိုင်ငံကုို ဖြတ်သော အန္ဒိယ၊ ယူနန်သွားရာလမ်း များစွာပွင့်သွားသည်။ ၎င်းလက်ထက်တွင် ခန္တီးလုံဒေသကုို တိဘက်ရန်ကာကွယ်ရန် ခံမြို့အဖြစ်တည်ထောင်သည်။ AD.1000 ၀န်းကျင်၌ ခန္တီးလုံသည် နန်ချောင်တုို့၏ လက်အောက်ခံပြည်နယ် တခုဖြစ်လာသည်။
AD.832 ၌ နန်ချောင်တုို့ ပျူ (သရေခေတ္တရာ) နှင့် AD.835 မွန်(ပဂေါ်) ကုိုဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးသည်။
AD.1010 ၌ သျှမ်းများသည် ရမည်းသင်း၊ ပျဉ်းမနား၊ မိတ္တီလာ၊ မကွေး၊ ကျောက်ဆည်၊ မန္တလေးနှင့် မြောက်ဖက်နယ်များကုို လွှမ်းမုိုးခဲ့သည်။
AD.1253 တွင် ကူဗလုိုင်ခန် (Kublikhun) သည် နန်ချောင်နှင့် AD.1287 ပုဂံ (Pagn Dynaty) ကုို ၀င်ရောက်သိမ်းပုိုက်သည်။ ထုိုအချိန်မှ သျှမ်းတုို့တောင်ဖက်နှင့် အနောက်ဖက်သုို့ ရွှေ့ပြောင်းရာ
AD.1285 တွင် ဗန်းမော် (Man Maw) ကုို၎င်း၊ မုိုးမိတ် (Mong Mit)၊ အုန်းဘောင် (On Baung)၊ Hsenwi မြို့များကုို တည်ထောင်သည်။ ထုိုမှ မုိုးကောင်း (Mong Kawng)၊ မုိုးညှင်း (Mong Yang)၊ ၀န်းသုို (Waing Hso)၊ ကသာ (Kat Hsa) မြို့များ တည်ထောင်သည်။
AD. 1296 ခန့်လောက်တွင် မုိုးညှင်းသုို့ သံစေလွှတ်ခြင်းကုို တရုတ်မှတ်တမ်းများတွေ့ရှိရသည်။
(AD. 1340-1371) Sao Hso Khan Pha/ Hso Kip Hpa (Si Ke- Chinese text) မုိုင်းမောကုို အုပ်စုိုးသည်။ ကျောက်ဆည်နယ်တွင် အခြေချသော သျှမ်းညီနောင်သုံးဦးကုို ဇင်းမယ်ကကူသလုို၊ မုိုင်းမောသည် စစ်ဆောင်ပန္နားနှင့် မဟာမိတ်ဖွဲ့သည်။ ၎င်း၏ညီဖြစ်သူ Sao Hsam Long Pha သည်
ဗန်းမော်မှတဆင့် မုိုးကောင်းတွင် တပ်မကုို အခြေချပြီး ဒုတိယမြို့တော် တည်ထောင်သည်။ ဧရာဝတီနှင့် ချင်းတွင်းမြစ်ကုို ဖြတ်ပြီး ကဘောချိင့်ဝှမ်း (Kabaw Valley)၊ ချင်းနယ်မြောက်ပုိုင်း၊ မဏိပူရ၊ ကချာ၊ အာသံ (Ahon) ကုို သိမ်းသွင်းအခြေချ နေထုိုင်ခဲသည်။
Sao Hsam Long Pha လက်ထက် မုိုးကောင်းကုို ဗဟုိုပြု၍ မိုင်း ၉ ၉ လုံးအုပ်ချုပ်သော မြောက်ပုိုင်းသျှမ်းများသည် ၎င်းတုို့ကုိုယ်ကုို TAI LENG ဟုခေါ်သည်။
အခြားသူများက မြန်မာဆန်သော Tai Leng သျှမ်းများကုို ၁၉ ၆၂ နေ၀င်းအစုိုးရမှ သျှမ်းဗမာ (Shan B’mah) ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းမျိုးနွယ်စုမှ မြောက်ဖက်စွန်းသုိ့ ရွှေ့ပြောင်းနေထုိုင်ကြသူများကုို Tai Khamti ဟုလူသိများသည်။
Tai Long, Tai Mao နှင့် Tai Nu စသော သျှမ်းမျိုးနွယ်များသည် ဗန်းမော် (Man Maw)၊ မုိုးမောက် (Mong Mauk)၊ ၀ုိုင်းမော်(Waing Maw)၊ ခပ်ချို (Kat Kiao)၊ နမ္မား(Nan Ma)၊ နမ္မတီး(Nan Ti)၊ မုိုးကောင်း၊ မုိုးညှင်းစသည့် ဒေသများတွင် နား(Na)ခေါ် လယ်ယာမြေများ ဖော်ထုတ်လုပ်ကုိုင်ကြသည်။
AD.1364တွင် ပင်းယဘုရင်မှ တုိုက်ခုိုင်းသဖြင့် စော်ဘွား၏ညီဖြစ်သူ သုိုချည်ဘွား (Sao Hsam Long Pha) သည် စစ်ကုိုင်းကုိုတုိုက်သည်။ မကူညီသောကြောင့် တဆက်တည်း ပင်းယကုို တုိုက်၍ ဘုရင် မုိုးကောင်းသုို့ ခေါ်ဆောင်သည်။ မှန်နန်းတွင် မောပါနရသူ ဟုခေါ်သည်။ ထုိုနှစ်တွင် သတုိုးမင်းဖျား အင်းဝ ကုိုတည်ထောင်သည်။
AD.(1449-?စီစစ်ဆဲ)တွင် မုိုးကောင်းစော်ဘွားအဖြစ် Si Bu Fa (Chinese-text) ဟော်နန်း ဆက်ခံသည်။
AD.(1475-?စီစစ်ဆဲ)တွင် မုိုးကောင်းနှင့် မုိုးညှင်းစော်ဘွားများ စစ်ဖြစ်သည်။
AD.(?စီစစ်ဆဲ-1532)တွင် ကျွမ်းစည်စား မုိုးညှင်းစလုံး (Sawlon)(Hso Long Hpa)(Si Lun Fa-Chinese text) သည် မုိုးကောင်းမင်းတရားကြီးဘွဲ့ ကုိုခံယူ၍ မုိုးကောင်းစော်ဘွားအဖြစ် ဟောနန်းဆက်ခံသည်။
ညီဖြစ်သူကုို ကျမုိုင်းရာထူး (Heir Apparent) အပ်နုင်းထားသဖြင့် သားဖြစ်သူ အရွယ် ရောက်သောအခါ ဟောနန်းပေးစရာမရှိပေ၊ စစ်တုိုက်ရာတွင် ဗျိုင်းအာင်လံကုို အသုံးပြုသည်။ အခြားစော်ဘွား ပြည်နယ်များနှင့် ဖက်ဒရယ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် (Feudal Federation) ဖြင့် သျှမ်းအုိုးစည်နုိုင်ငံအား မုိုးကောင်းကုို ဗဟုိုပြု၍ တည်ထောင်သည်။
AD.(1503-1507,1518)တွင် မြေဒူးကုို၎င်း၊ (AD.1512)၌ ဗန်းမော်၊ (1520)တွင် ကလေး၊ (1522)၌ မင်းကင်း စသည့် စောဘွားများကုို၎င်း၊ (1525)တွင် စစ်ကုိုင်း၊ AD.1527တွင် အင်းဝကုို သိမ်းပုိုက်ပြီး သားဖြစ်သူ သုိုဟန်ဘွား (Thohanbwa)အား အင်းဝထီးနန်းကုို ဆက်ခံစေသည်။ AD.1532၌ သားဖြစ်သူ သုိုဟန်ဘွားနှင့်အတူ ပြည်ဘုရင်ထွေးကုို သွားရောက် ဖမ်းဆီးပြီးနောက် စစ်ကုိုင်းတွင် လွှတ်ပေးသသည်။ ယင်းမှအပြန်လမ်း အမတ်များ လုပ်ကြံခြင်းခံရသည်။
AD.(1557) မုိုးကောင်းစော်ဘွား Sao Peng လက်ထက်တွင် ဘုရင့်နောင် (Bayinnaung)သည် မုိုးကောင်းအပါအ၀င် သျှမ်းပြည်အားလုံးကုို သိမ်းသွင်းသည်။ စော်ဘွား Sao Pengကုိုပင် စော်ဘွားအရာ ဆက်ပေးသည်။
AD(1761-1777)တွင် စော်ဘွား စောရွှေမော်၏သား စောဟော်ခန်း (Haw Hseng)က ၁၆ နှစ်ဖြစ်၏
AD(1787-1795)တွင် စောဖြူညီ စောကျော်က ဟောနန်းသက် ၈နှစ်ဖြစ်၏
AD(1795-1810)တွင် စော်ဟော်ခန်း၏ညီ စောခုိုင်သည် မုိုးကောင်းဟော်နန်းကုို သား၊ မြေးများ အကူညီနှင့် ပြန်ဆက်ခံသည်။ ၎င်းလက်ထက်တွင် တတိယမြောက်မုိုးကောင်းမြို့ ပျက်စီးသည်။
လွှဲလော ရွှေကျောင်း ဆရာတော်၏ လက်ရေးမှုအရ ယင်းနေရာ မုိုင်းကောင်း၊ ကားမုိုင်းလမ်းနှင့် မြစ်ကြီးနား၊ မန္တလေး ကားလမ်းဆုံရာတွင် ဖြစ်သည်။ ယနေ့တုိုင် မုိုးကောင်းမြို့ဟောင်းဟု ခေါ်ဆုိုနေကြပါသည်။ ယခုမုိုးကောင်းနှင့် ၈မုိုင်ခန့်အကွားတွင်ရှိသည်။ မုိုးကောင်းစော်ဘွား ၂၉ ဆက် ဆက်ခ့သည်။ ၁၂ နှစ်ကြာသော စော်ဘွားမရှိခဲ့ပေ။
AD(1822-1827)တွင် စော်ဘွားခွန်ကောင်းဆုိုင် (စောငန်းမုိုင်းလုံ)က ဘုရင်မှပေးသော စောဆုဆုင်ခက်ဘွ ဘွဲ့တော်ဖြင့် လက်ရှိ မုိုးကောင်းမြို့ကုို တည်၍ ဟော်နန်းပြန်စုိုက်ခဲ့သည်။ ၎င်းစော်ဘွားလွန်သော စော်ဘွားဆက်ပြတ်ပြီး မြို့ဝန် (၅၄ ဆက်)ကုို မြန်မာဘုရင်က တုိုက်ရုိုက်ခန့်ထား အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။
AD(1883)တွင် စော်ဘွား စော်ဟော်ခန်း၏ အဆက်အနွယ်မှ မောင်ရွှေလီ ဦးဆောင်၍ ပုန်ကန်ရာ တိုိုင်းလျဲန်မျိုးနွယ် ၀န်းသုိုစော်ဘွား ဦးအောင်မြတ် နှိမ်နှင်းနုိုင်သဖြင့် သုိုဟုံဘွားဘွဲ့ကုို သီပေါဘုရင်မှ ချီးမြင့်ပေးအပ်သည်။ ထုိုသုို့နှိမ်နှင်းမှုကြောင့် မြစ်ကြီးနားဒေသတွင် တုိုင်းလျှဲန်ရွာများ ဖျက်ဆီးခံထားရပြီး
AD.(1890)တွင် အင်္ဂလိပ် စစ်မှတ်တမ်းများအရ တုိုင်းလျှဲန်ရွားပေါင်း ၁၈ ရွာကျန်ရှိနေ
မြန်မာပြည် အထက်ပိုင်းတွင်နေထိုင်သော ဒေသခံသျှမ်းအမျိုးအနွယ် များမှာ တိုင်းလျဲန် (သျှမ်းနီ) တိုင်းခန္တီး (ခန္တီးသျှမ်း)၊ တိုင်းနေ (သျှမ်းတရုတ်)၊ တိုင်းလုံ (သျှမ်းကြီး) တိုင်းဂဒူး၊ တိုင်းဂဏန်း၊ တိုင်းဖွန်း၊ တိုင်းဆာ(ခေါ်) မိုင်းသာသျှမ်း တို့ဖြစ်သည်။ တုိုင်းလုံ (သျှမ်းကြီး) မှလွဲ၍ ကျန်အားလုံးတုို့ တုိုင်းလျဲန်အုပ်စုဝင် များပင်ဖြစ်သည်။
မိုးကောင်းမြို့ကို ရှေးယခင်းက မိန်းကောင်းဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ကြသည်။ “မိန်းကောင်း” (Ming Gawng) သျှမ်းဘာသာ စကားဖြစ်သည်။ မိန်းသည်= မြို့တော် ဟုအဓိပ္ပါယ် ရပြီး ကောင်းမှာ = အိုးစည် ဟုအဓိပ္ပါယ် ရသဖြင့် မိန်းကောင်း ကို“အိုးစည်မြို့တော် ဟု အဓိပ္ပါယ် ရသည်။ ကာလကြာ လာသောအခါ မိန်းကောင်းမှ မိုးကောင်းဟု တွင်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မိုးကောင်း လေးကြိမ် လေးနေရာ ပြောင်း၍ တည်ခဲ့ ကြောင်းမှတ်တမ်း များအရ သိရသည်။ ရှေးလူကြီးများ၏ ပြောကြားချက်ကို ဆက်စပ်ညှိနှိုင်း မှုအရ ပထမ မိုးကောင်းမြို့၏တည်နေရာမှာ သျှမ်းဘာသာ စကားအရ ပူကမ်းမြို့ ခေါ်သော ကားမိုင်းမြို့ ဖြစ်သည်။ ဒုတိယ မိုးကောင်းမြို့ ၏တည်နေရာမှာ ကားမိုင်းမြို့အနီး ပတ်လှော် နေရာဖြစ်သည် ဟုဆိုပါသည်။ တတိယ မိုးကောင်းမြို့ ၏တည်နေ ရာသည် ယခုမြို့ဟောင်းနေရာ ဖြစ်ပြီး၊ စောဘွားကြီး ခွန်ကောင်းဆိုင်း ကတည်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မြို့အမည်မှာ “မိန်းကောင်းဆိုင်း” ဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းကန် ပုထိုးများဖြင့် ထင်ရှားပြီး ဘာသာ သာသနာ ရောင်ဝါ ထွန်းလင်းခဲ့ပါသည်။ ညောင်ရမ်းမင်းတရားကြီး လက်ထက် ကောဇာ(၉၆၁) လက်ထက်တွင် “တတိယ မိန်းကောင်း (မိုးကောင်း)” ပျက်သုန်းခဲ့ပါသည်။ စတုတ္ထမိုးကောင်းမြို့ကို ကောဇာ(၁၁၅၃)ခုနှစ် နတ်တော်လဆန်း (၁၂)ရက်၊ အင်္ဂါနေ့ နံနက် အာရုဏ်တက်ချိန် တွင် မြို့ဟောင်း စော်ဘွားကြီး၏သား စောက်မောင်ဆိုင် နန့်ရင်းချောင်းနှင့် နန့်ကောင်းဆုံရာတွင် မြို့စတင် တည်ခဲ့ပါသည်။ မိုးကောင်းမြို့သည် ကောဇာသက္ကရာဇ် (၁၁၅၃)ခုနှစ်ကို မှတ်သားရ လွယ်ကူစေရန် “အိမ်အောက်မြစိမ်း မိုးကောင်းကိန်း” ဟုစပ်ဆိုခဲ့ပါသည်